UN Iyo Amisom Oo Gobolka Baay Ku Tababaraya 1000 Boolis Ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baydhabo – Mareeg.com: Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ayaa iska kaashanaya tababarka ilaa 1000 askari oo ka tirsan booliska dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Baay.
War qoraal oo kasoo baxay Taliska AMISOM ayaa la sheegay in Baydhabo lagu tabbabari doono dhowaan ilaa kun askari oo Boolis ah kuwaas oo xoojin doona Ciidamada kale ee Federaalka ee jooga gobolka Baay.
Xero lagu magacaabo Cali Salamay oo ku taalla gobolka Baaya ayaaa lagu tababari doonaa ciidamada booliska ah, waxaana dhawaan xeradaas booqasho ku tegay khuburo ka tirsan qeybta booliska ee Qaramada Midoobay iyo AMISOM.
Xeradan ayaa warka AMISOm lagu sheegay in horay Alshabaab burbur xoog leh ugu geysteen, islamarkaana la dayactiro doono.
Taliyaha qeybta gobolka Baay Col. Mahad Cabdirahman ayaa soo dhoweeyay taageerada AMISOM ay siinayso ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan xagga tabbabarada.
AMISOM ayaa hore tabbabaro u siisay Ciidamo iyo saraakil ka tirsan Dowladda Federaalka, hase ahaatee lama arko natiijo kazoo baxda ciidamada la tababaro.
Qarax Gaari Oo Ka Dhacay Agagaarka KM4 Ee Magaalada Muqdisho